स्वास्थ्य/जीवनशैली  OnlineKhabar
एउटा घतलाग्दो कथा छ । एकादेशमा एक राजा थिए । उनलाई रोग लाग्यो । धेरै वैद्य-चिकित्सकलाई देखाए । तर, कसैले उनको रोग निको पार्न सकेनन् । यस्तैमा एक वैद्यले सल्लाह दिए, ‘राजालाई त्यस्तै वातावरणमा निको हुन्छ, जहाँ हरियो नै हरियो होस् । राजाले देख्ने सबै कुरा हरियो हुनुपर्छ ।’ राजाले आफ्नो आसपासका सबैकुरा हरियो...
नाकको हड्डी बढ्नु कति जटिल ?
नाकको भित्र रहेको दायाबायाको पर्खालमा विशेष प्रकारको रगत मिश्रति मासुको डल्लो (टर्बिनेट) रहने गर्दछ । जसले नाकमा छिर्ने हावालाई आफू अनुकल बनाउन मद्दत गर्दछ । टबिनेट प्राय फुल्ने तथा सुक्ने गर्दछ । सोही क्रममा टर्विनेट ठूलो भएमा यसले नाकका समस्या हुने गर्दछ । विशेषगरी, ठूलो टर्बिनेटका कारण नाकमा जाने हावामा रुकावट पैदा हुन्छ ।...
गुरुभक्त अभागी एकलव्य, यस्तो छ दुखलाग्दो कहानी
एकलव्य महाभारतका एक चर्चित पात्र हुन् जसले आˆनो बूढी औंला काटेर गुरुदक्षिणाका रूपमा बुझाएका थिए । विभिन्न पुराणमा यिनको विषयमा अनेक कुरा पाइन्छ । कसैले एकलव्यलाई शिकारीको छोरो भनेका छन् भने कसैले भिल्लको छोरो भनेका छन् । कतिपयले एकलव्य शूऽ भएका कारण गुरु द्रोणाचार्यले शिक्षा दिन नमानेको बताएका छन्। जब कि यी कुरा गलत...
झम्सिखेलको बिजी बिन, स्वादिलो, स्वस्थ्यकर र सस्तो
झम्सिखेल, अर्थात फुड जक्सन । फरक स्वाद खोज्दै हिँड्नेहरुका लागि झम्सिखेलले अनेक मेनु पस्किएको छ । अँ त, अहिले झम्सिखेल रेष्टुरेन्ट हब नै बनेको छ । कुनैबेला यसलाई ठमेलसँग तुलना गरिन्थ्यो । कतिले झम्सिखेलको सर्टकट नाम बनाएका थिए, झमेल । तर, अहिले यसको आफ्नै चिनारी छ । यहाँ यस्ता रेष्टुरेन्ट, पब, क्याफे छन्, जसले...
डाक्टर भन्छन् : उपचार कहिल्यै पनि अपराध हुँदैन, कानून संशोधन गर्नुपर्छ
२८ साउन, काठमाडौं । भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) मा गरिएको कारबाहीको व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले उक्त ऐन कार्यान्वयन भएपछि डाक्टरहरुले विरामी जाँच्नै नसक्ने अवस्था रहने भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । डाक्टरको लापरबाहीले विरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्ष कैद सजाय हुने लगायतको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग...
नाकको हड्डी बाङ्गो भएमा के हुन्छ ? यस्तो छ समाधान
मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंगहरुमध्यको ‘नाक’ पनि एक हो । नाकको बनोट सही नभएमा यसले अनुहारलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण शरीरलाई नै प्रभावित पार्ने गर्दछ । कतिसम्म भने नाककै बनोटका कारण निरन्तर सिगान बग्ने देखि सास लिनमा समस्या समेत हुने गर्दछ । त्यतिमात्र हैन, टेढो वा बाङ्गो नाककै कारण मानिसको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउने गर्छ ।...
किन आउँछ अमिलो डकार ? यस्तो छ कारण
खाना खाएपछि मानिसहरुलाई अक्सर डकार आउने गर्दछ । डकार लिनाले पेटमा जम्मा भएको हावा बाहिर निस्कने गर्दछ । यस्तो डकार सामान्य हुदाँसम्म हामीलाई खासै समस्या हुँदैन । तर जब पेटबाट अमिलो डकार निस्किएमा भने धेरैलाई तनाव हुने गर्छ । आखिर किन आउँछ अमिलो डकार ? चिकित्सकहरुका अनुसार ग्याष्ट्रिकको समस्या भएमा पनि अमिलो डकार निस्कने...
कम खर्चमा कसरी पहिलो डेटलाई रोमान्टिक बनाउने ?
भर्खरै यौवनकालमा प्रवेश गर्नुभएको होला । कसैसँग भावनात्मक रुपले नजिकिनु भएको होला । नयाँ प्रेमी वा प्रेमिका बनाउनु भएको होला । प्रेमी/प्रेमिकाले कतै एकान्तमा गएर मनको कुरा खोल्ने सोंच होला । उसको सामिप्यमा रमाउने रहर होला । पहिलो डेटको अनुभव लिने योजना होला । तर, यो उमेरमा आफ्नो कमाई नहुन सक्छ । बजेटको अभाव...
सामान्य दुखाईमा पेनकिलर खानु हानिकारक ! यस्ता छन् साइडइफेक्ट ?
सामान्य दुखाई सहन हामीलाई गाह्रो लाग्छ । विसञ्चो जस्तो भयो, शरीरको कुनै भाग दुख्यो भने त्यसको तत्काल समाधान खोज्छौं । समाधानका लागि हामीलाई सजिलो लाग्छ, पेन किलर । अर्थात दुखाई कम गर्ने औषधी । पेन किलर जुनसुकै औषधी पसलमा पाइन्छ । धेरै पैसा लाग्दैन । चिकित्सकको प्रेस्किप्सन पनि देखाइरहनु परेन । चकलेट किने झै...
गर्दन दुख्छ ? कारण र उपचार यस्तो हुनसक्छ
गर्दर्न दुख्ने समस्या आम समस्या हो । यो समस्या प्रायःकम्प्युटर वा मोबाइलमा लामो समय विताउने वा अग्लो तकिया राखेर सुत्ने मानिसहरुमा देखा पर्ने गर्दछ । त्यसबाहेक, ओस्टियोपोरोसिस, सर्भाइकल बोन हर्निएशन लगायतका समस्या भएमा पनि गर्दन दुख्ने गर्छ । हुन त गर्दन दुख्ने समस्या जटिल समस्यामा पर्दैन । त्यसैले, यो समस्या दुई देखि तीन हप्तासम्ममा...
रोग र शोकबाट उन्मुक्तिका लागि शरीर एवं मनलाई शुद्धिकरण गरौं
आज साउनको अन्तिम सोमबार । साउन महिना खासगरी नुहाइधुवाई, सात्विक भोजन गरी, पूजा आरधाना गर्ने महिना । धार्मिक विधी विधान अनुसार यस महिनाको खास महत्व छ । यतिबेला हामी मन्दिर धाउने गर्छौं । पूजाआजा गर्छौं । उपवास बस्छौं । वा, सात्विक भोजन ग्रहण गर्छौं । उपवास बस्नुको आत्मिक, शारीरिक फाइदा छ । यसले हाम्रो पाचन...
काउन्सिलको परीक्षामा २४ प्रतिशत डाक्टर मात्रै उतीर्ण
२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा २४.४ प्रतिशत मात्र उतीर्ण भएका छन् । ७७६ जना एमबीबीएस पास गरेका चिकित्सकहरुले दिएको लाइसेन्स परीक्षामा जम्मा १८९ जनामात्र पास भएका छन् । ‘यो नजितालाई हेर्दा धेरे विद्यार्थी फेल भएको देखिएपनि वर्षभरीको नतिजालाई आधार मान्दा नेपालमा वाषिर्क ६० देखि ७०...
123 … 278 पछिल्ला »
लोकसेवाको विज्ञापन बन्द गर्न लागेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण